ኢያሱ 19 NASV – Yosua 19 ASCB | Biblica
ኢያሱ 19 NASV – Yosua 19 ASCB
Asase A Wɔde Maa Simeon
1Asase no kyɛfa a ɛtɔ so mmienu no kɔɔ Simeon abusuakuo no nsam. Na Yuda asase atwa wɔn ho ahyia. 2Na deɛ ɛdidi soɔ yi ne Simeon agyapadeɛ:
Beer-Seba, Seba ne Molada, 3Hasar-Sual, Bala ne Esem, 4Eltolad, Betul ne Horma, 5Siklag, Bet-Markabot ne Hasar-Susa, 6Bet-Lebaot ne Saruhen. Nkuro dumiɛnsa ne wɔn nkuraaseɛ.
7Nkuro a ɛka ho bio ne Ain, Rimon, Eter ne Asan, nkuro ɛnan ne wɔn nkuraaseɛ, 8ne nkuraaseɛ a ɛwɔ anafoɔ fam kɔsi Baalat-Beer (a wɔfrɛ no Rama a ɛwɔ Negeb).
Yei ne mmusua a wɔwɔ Simeon abusuakuo mu no agyapadeɛ. 9Wɔn agyapadeɛ no yɛ Yuda deɛ no fa bi a wɔde maa Yuda, ɛfiri sɛ, na Yuda asase no so dodo ma wɔn. Ɛno enti, Simeon abusuakuo no nyaa wɔn agyapadeɛ firii Yuda asase no mu.
Asase A Wɔde Maa Sebulon
10Asase no kyɛfa a ɛtɔ so mmiɛnsa no kɔɔ mmusua a wɔbɔ mu yɛ Sebulon abusuakuo no nsam.
Sebulon agyapadeɛ ɛhyeɛ no hyɛ aseɛ wɔ Sarid. 11Ɛfiri hɔ kɔ atɔeɛ fam, kɔpa Marala ho na akɔka Dabeset. Ɛfa hɔ kɔ Yokneam apueeɛ fam asuwa ho. 12Ɛhyeɛ no fa firi Sarid kɔ apueeɛ fam kɔsi Kislot-Tabor; ɛtoa so kɔ Daberat na aforo akɔ Yafia. 13Afei, ɛtoa so kɔ apueeɛ fam kɔduru Gat-Hefer, Et-Kasin ne Rimon, na ahima ahwɛ Nea. 14Sebulon ɛhyeɛ a ɛda atifi fam no fa Hanaton na ɛbɛwiee wɔ Yifta-El bɔnhwa mu.
15Nkuro ɛwɔ asase yi so ne: Katat, Nahalal, Simron, Yidala ne Betlehem.19.15 Ɛsono Betlehem a wɔbɔ din wɔ ha yi na ɛsono Betlehem a ɛwɔ Yuda no (1 Sam 17.12; Rut 1.1). Nkuro dumienu ne wɔn nkuraaseɛ a atwa ho ahyia.
16Yei ne mmusua a ɛbɔ mu yɛ Sebulon abusuakuo no agyapadeɛ.
Asase A Wɔde Maa Isakar
17Asase no kyɛfa a ɛtɔ so ɛnan no kɔɔ mmusua a wɔbɔ mu yɛ Isakar abusuakuo no nsam. 18Nʼahyeɛ nenam saa nkuro yi so:
Yesreel, Kesulot ne Sunem, 19Hafraim, Shion ne Anaharat, 20Rabit, Kision ne Abes, 21Remet, En-Ganim, En-Hada ne Bet-Pases.
22Ɛhyeɛ no kɔfa Tabor, Sahasima ne Bet-Semes na akɔwie Asubɔnten Yordan ho.
Nkuro dunsia ne wɔn nkuraaseɛ na atwa ho ahyia.
23Yei ne mmusua a wɔbɔ mu yɛ Isakar abusuakuo no agyapadeɛ.
Asase A Wɔde Maa Aser
24Asase no kyɛfa a ɛtɔ so enum no kɔɔ mmusua a wɔbɔ mu yɛ Aser abusuakuo no nsam. 25Nʼahyeɛ no fa saa nkuro yi so:
Helkat, Hali, Beten ne Aksaf, 26Alamelek, Amad ne Misal. Ɛhyeɛ a ɛda atɔeɛ fam no firi Karmel kɔ Sihor-Libnat, 27na ɛbuka fa apueeɛ fam kɔ Bet-Dagon, kɔ ara kɔsi Sebulon wɔ Yifta-El bɔnhwa no mu, kɔ atifi fam kɔduru Bet-Emek ne Neiel. Ɛtoa so kɔ atifi fam, kɔfa Kabul, 28ne Ebron ne Rehob ne Hamon ne Kana, kɔ ara kɔsi Sidon Kɛseɛ. 29Afei ɛhyeɛ no dane kɔfa Rama ne Kuropɔn Tiro a wɔabɔ ho ban no bɛsi Ɛpo Kɛseɛ no ho wɔ Hosa. Nkuro a ɛwɔ asase no so bi ne Mehebel ne Aksib, 30Uma, Afek ne Rehob.
Nkuro aduonu mmienu ne wɔn nkuraaseɛ na atwa ho ahyia.
31Yei ne mmusua a ɛbɔ mu yɛ Aser abusuakuo no agyapadeɛ.
Asase A Wɔde Maa Naftali
32Asase no kyɛfa a ɛtɔ so nsia no kɔɔ mmusua a wɔbɔ mu yɛ Naftali abusuakuo no nsam.
33Ne ɛhyeɛ no firi Helef, Saananim dupɔn no ho, kɔfa Adami-Nekeb ne Yabneel, toa so kɔ Lakum kɔpem Asubɔnten Yordan. 34Atɔeɛ fam ɛhyeɛ no twam wɔ Asnot-Tabor kɔ Hukok, kɔsi Sebulon ɛhyeɛ no wɔ anafoɔ fam, Aser ɛhyeɛ wɔ atɔeɛ fam ne Asubɔnten Yordan wɔ apueeɛ fam.
35Mantam yi mu nkuropɔn a na wɔabɔ ho ban no ne Sidim, Ser, Hamat, Rakat ne Kineret, 36Adama, Rama ne Hasor, 37Kedes, Edrei ne En-Hasor, 38Yiron, Midgal-el, Horem, Bet-Anat ne Bet-Semes.
Nkuro dunkron ne wɔn nkuraaseɛ na atwa ho ahyia.
39Yei ne mmusua a wɔbɔ mu yɛ Naftali abusuakuo no agyapadeɛ.
Asase A Wɔde Maa Dan
40Asase no kyɛfa a ɛtɔ so nson no kɔɔ mmusua a wɔbɔ mu yɛ Dan abusuakuo no nsam. 41Nkuro a na ɛwɔ Dan agyapadeɛ mu no bi yɛ:
Sora, Estaol ne Ir-Semes, 42Saalabin, Ayalon ne Yitla, 43Elon, Timna ne Ekron, 44Elteke, Gibeton ne Baalat, 45Yehud, Bene-Berak ne Gat-Rimon, 46Me-Yarkon, Rakon ne asase a ɛda Yopa anim.
47Nanso, Dan abusuakuo no nyaa akwansideɛ wɔ wɔn asase no fa ho enti wɔko tiaa Lesem. Wɔdii kuro no so, kunkumm mu nnipa, faa hɔ, tenaa hɔ. Wɔde wɔn tete agya Dan din too kuro no.
48Yei ne mmusua a wɔbɔ mu yɛ Dan abusuakuo no agyapadeɛ, saa nkuro yi ne wɔn nkuraaseɛ.
Asase A Wɔde Maa Yosua
49Wɔkyekyɛɛ asase no mu maa Israel mmusuakuo no wieeɛ no, Israelfoɔ no maa Yosua asase sini sononko bi sɛ nʼagyapadeɛ. 50Na Awurade aka sɛ kuro biara a Yosua pɛ no, ɔmfa. Yosua faa Timmat-Sera a ɛwɔ Efraim bepɔ asase no so. Ɔkyekyeree kuro no foforɔ na ɔtenaa hɔ.
51Yeinom ne agyapadeɛ a ɔsɔfoɔ Eleasa, Nun babarima Yosua ne mmusuakuo mpanimfoɔ no nam ntontobɔ kronkron a wɔbɔɔ wɔ Awurade anim wɔ hyiadan ɛpono no ano wɔ Silo no de maa Israel mmusuakuo no. Enti, ɛmaa asase no mu kyekyɛ baa awieeɛ.
ASCB : Yosua 19